HADDA RAAC - Transportation | seattle.gov
Waa maxay foojarada Ride Now?
Dalbo baabuurta curyaanka oo jaban marka aad rabto, wax boos celin ah looma baahna.
Dadka waaweyn ee da'doodu tahay 65+, dadka naafada ah, iyo daryeelayaasha la socda dadka xaqa u leh foojarka waxay dalban karaan ilaa 6 lacag la'aan ah $20 foojar bishii si loogu isticmaalo Yellow Cab, Uber, ama Lyft raacitaanka ama laga soo qaado saldhigyada gaadiidka sida joogsiyada baska iyo Link tareenka fudud, ama meelaha kale ee u dhow ee aan si fiican loogu adeegin gaadiidka, sida jardiinada ama guriga qaraabada. Foojarradan $20 waa inay si buuxda u daboolaan inta badan safarrada ilaa 3 mayl. Dhammaan raacitaanku waa inay ka bilowdaan ama ku dhammaadaan gudaha xadka magaalada Seattle.
Kadib markii ay bateen dadka soo dalbanaaya adeega Tijaabada ee Ride Now waxaa lagu kordhiyey mudadiisa ilaa june 2022. Shakhsiyaadka u qalma waa inay kala doortaan inay helaan warqado ama foojarrada dhijitaalka ah si ay ugu adeegsadaan Bixiyayaasha adeegga rideshare. Xirmo kasta oo Vouchero ah oo la dalbaday waxay dhacaysa dhamadka Bilaha (March, April, May, June 2022), dalabka Voucherada cusub waxay soconaysaa inta laga gaarayo June 3, 2022. Voucherada Raacitaanka lama aqbalaayo wixii ka danbeeya June 30, 2022. Voucherada waxaa la heli kara inta aysan dhaman.
Wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barnaamijka Ride Now iyo sida adeegan baahida loo qabo uu u caawin karo adiga ama qof aad ku taqaan luqadda aad doorbideyso, fadlan naga soo wac (206) 684-7623 (ROAD) ama iimayl noogu soo dir RideNow@seattle.gov. Adeega tarjumaaddu waa lacag la'aan.
Riix halkan si aad u hesho warqad-warbixineed.
Naga caawi inaa soo saarno adeegyo mustaqbalka adiga oo noo sheegaya waxaad u malaynayso barnaamijka Tijaabada Ride Now.
Codso foojarkaaga ugu horreeya adiga oo buuxinaya foomka hoose ama adoo naga soo wacaya (206) 684-ROAD . Foojarrada waa la heli karo inta sahaydu ay dhammaanayso.
Waa kuwee adeegyada gaadiidka aqbala boonooyinkan?
Foojarrada ayaa dhimi doona ama si buuxda u bixin doona kharashka raacitaanka iyada oo loo marayo bixiyeyaasha soo dhaweya ka qaybqaadashada ee hoos ku taxan.
Sida loo isticmaalo boonooyinkaaga
Talaabada 1: dalbo raacitaan
Ku dalbo raacidaada mid ka mid ah hababkan la heli karo:
Taleefanka: wac taksi jaale ah adigoo wacaya (206) 622-6500.
App-ka taleefanka casriga ah: Ku qabso taksi jaalaha ah, Uber, ama Lyft iyaga oo isticmaalaya abka taleefankaaga casriga ah.
Kumbuyuutar: Ka qabso ballan Uber ama Lyft wabsaydka internetka ee kumbuyuutarkaaga ama tablet-kaaga.
Waxaad heli doontaa macluumaad ku saabsan goorta aad filayso inuu gaarigaagu yimaado oo waxaad waydiisan kartaa darawalkaaga meelo cayiman.
Talaabada 2: Baabuurku wuxuu ku yimaadaa waqti ku haboon
Tagaasiga jallada, Uber, ama Lyft waxay imaan doonaan waqti dhaw, caadi ahaan 10-30 daqiiqo gudahood marka la codsado.
Baabuurta Uber ama Lyft caadi ahaan waa sedan (baabuur), haddii aan si kale loo cayimin.
Yellow Cab waxa ay siisaa baabuurta ay geli karaan kursiga curyaanka ee raacayaasha u baahan.
Talaabada 3: kadago oo bixi lacagta
Darawalku waxa uu kugu dejin doonaa goobta baska ama trainka ee kuugu dhow ama meesha kale ee u dhow halkaad u socotay.
Isticmaal warqadaada ama foojarka dhijitaalka ah si aad u isticmaasho qiimo dhimista safarkaaga
Foojarka raacitaanka $20 waxaa loola jeedaa in lagu sameeyo safarrada ugu badnaan ilaa 3 mayl bilaash ah ama si qoto dheer loo dhimay.
Bixi lacagta baaqi ah ee hadhay. Raacida Taksi jaale ah, tan waxaa lagu samayn karaa lacag caddaan ah ama kaarka deynta/debit ka. Lacagta ka soo haray safarka Lyft ama Uber waa in lagu bixiyaa kaarka deynta ama kaarka debitka ee faylka ku jira abka telefoonka casriga ah.
Fadlan xasuuso inaad lacag ugu dartid darawalkaaga!
Kaab jaalaha ah: Hadhaaga ka haray foojarka warqadda waxa loo isticmaali karaa talooyin ama waxa laga yaabaa inaad lacag caddaan ah ku bixiso.
Lyft ama Uber: Dareewalada lacag bixinta dheeraadka waxaa lagu samayn karaa abka telefoonka casriga ah iyadoo la isticmaalayo kaarka deynta ama kaarka bangiga ee faylka ku jira. Foojarrada dhijitaalka ah looma isticmaali karo tilmaanta fuulista Uber ama Lyft.
Tallaabada 4: Bixi jawaab celin (dhiirigelin)
Waxaad heli doontaa sahan gaaban oo aad ku bixin karto jawaab celin ku saabsan raacitaankaada iyo fikrado kaa caawin doona qaabaynta adeegyada mustaqbalka.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato sida loo isticmaalo adeegyadan rideshare iyo boonooyinkaaga, waxaad wax badan ka akhrisan kartaa Blog-ga SDOT.
Waayeelka Magaalada Lake
Kaalmaynta dadka sii gabobaya lagana caawiyo adeegyada, agabka, iyo barnaamijyada xarunta dhexe ee dhaqanka.
Maalgelinta caawisay suurtagelinta barnaamijka tijaabada ee Ride Now waxaa lagu helay Qorshaha Transit 4 Dhammaan deeqaha, mashruuca qorsheynta gaadiidka qaranka kaas oo sahaminaya oo kor u qaadaya hababka ugu wanaagsan ee lagu daro dadka naafada ah iyo dadka waaweyn ee qorsheynta gaadiidka.
Iyada oo qayb ka ah Qorshaynta Gaadiidka 2018-2019 4 Dhammaan Kooxda Deeq-bixiyayaasha, Hopelink (King County, WA) waxa ay abuureen Qalabka Qorshaynta ee Loo Dhanyahay, Duruusta laga bartay Hopelink iyo ka qaybgalka Isbahaysiga Dhaqdhaqaaqa Degmada King ee deeqda. SDOT waxay si weyn u isticmaashay Qalabka Qorsheynta Loo Dhanyahay si ay u qorshayso barnaamijkan tijaabada ah.
Waxaad sahamin kartaa Qalabka Qorsheynta Loo Dhanyahay ee Hopelink .